3A Qallajinta Gaaska Dabiiciga ah, HDS ee Nafta, Hantidhowrka Alumina ee Hantidhowrka - Gascheme
Soo kabashada baaruudda
Kaarboon Molecular Medium (CMS)
Shanghai Gascheme Co., Ltd. (SGC), waa bixiye caalami ah oo wax soo saariya iyo xayeysiis. Ku tiirsanaanta hanashada farsamada ee xarunteenna cilmi-baarista, SGC waxay nafteeda u hureysaa horumarinta, soo-saarista iyo u qaybinta soo-saareyaasha iyo xayeysiisyada warshadaha sifeynta, warshadaha kiimikada iyo kiimikada. Wax soo saarka SGC waxaa loo isticmaalaa si ballaaran dib-u-habeynta, dib-u-habeynta, dib-u-habeynta uumiga, baaruud-soo-kabashada, soo-saarka hydrogen-ka, gaaska synthetic, iwm.
Daraasadaha iyo dhiirrigelinta la-taliyayaasha ku saabsan sifaynta saliidda, kiimikada kiimikada iyo nadiifinta gaaska dabiiciga ah.
R&D ee qalabka (Zeolites) iyo soojiyeyaasha. R&D ee ka shaqaynta sifaynta saliida (hydrotreating / hydrocracking / reforming / isomerization / fuuqbaxa) iyo ka shaqaynta gaaska dabiiciga (qodabka / TGT).
Khubaro khibrad u leh khibradaha hodanka ah ee R&D iyo ku shaqeynta baahiyahaaga.
052020 / Nofeembar
Habka waxqabadka dusha sare ee jawaabta (RSM) ayaa loo adeegsaday in lagu barto habka leaching acid ee habsami u socodka qashinka Co Mo oo ku saleysan xoojinta hawo-abuurka. Ujeedada tan ...
Daraasad ku saabsan geeddi-socodka asiidhka aashitada ee isku-duwaha hydrotreating ee Co Mo
Habka waxqabadka dusha sare ee jawaabta (RSM) ayaa loo adeegsaday in lagu barto habka leaching acid ee habsami u socodka qashinka Co Mo oo ku saleysan xoojinta hawo-abuurka. Ujeeddada daraasaddan ayaa ahayd in laga soo bandhigo CO iyo Mo ka soo-kiciyaha kharash-gareeyay ee loo yaqaan 'solven' oo ah qaab biyo-ku milma, si loo fududeeyo waxyaabaha soo socda ...
Diyaarinta shaandhada maadada kaarboon kaarboonka
Haddii dhibcaha jujube ee huanbingwei iyo CMB la isku daro, walxaha cusub waxay lahaan doonaan faa'iidooyinka soo socda: boodh lama soo saari doono marka la isticmaalo. Waxaa lagu xoojiyay 5-FU. Mashiinnada maaddada 'Carbon fiber' ee leh karti-isweydaarsiga ion waxaa lagu diyaarin karaa daaweyn jireed iyo kiimiko oo dheeri ah. The ...
Guryaha iyo isticmaalka kaarboon firfircoon
Kaarboon firfircoon: waa nooc ka mid ah xayeysiisyada aan qallafsaneyn ee loo isticmaalo. Guud ahaan, waxay u baahan tahay in lagu dhaqo aashitada hydrochloric acid, oo ay ku xigto ethanol, ka dibna lagu maydho biyo. Ka dib markaad ku qalajiso 80 ℃, waxaa loo isticmaali karaa tiirka chromatography. Kaarboon firfircoon oo firfircoon ayaa ah xulashada ugu fiican ee tiirka ch ...
Rm, 102-104, Dhismaha 1aad, No.1008, DongChangZhi Rd,